Meelo badan oo loogu talagalay AutoCAD - Geofumadas
Waxaan horay u sameynay liiska laga bilaabo meelaha aad ka soo degi karto blocks for AutoCAD, iyo sidoo kale ee Microstation.
Hadda waxaan ku darsaday barta kale ee igu soo jiidatay xaddiga qulqulka ay leedahay iyo habka loo abaabulo. Meeshani waa Forum-ka Inkasta oo goobta uu leeyahay waxyaabo badan, sida xirfado iyo jawi aad u ballaaran, qaybta qaybta ayaa leh ururin wanaagsan oo ka mid ah xayawaanka.
Haddii ay jirto xaaladaha guud ee loogu talagalay AutoCAD waxaa lagu qabanqaabiyaa: Dhismaha, Mapping, Boruubyada, Mechanics, Gaadiidka, Korontada. Waa kuwan liiska waxyaabaha aad ka heli karto.
Qolka jiifka 12,
Faahfaahinta dhismaha 57,
Sawirrada xubno 74,
Dhirta, geedaha 97,
Amniga, caafimaadka 123,
Xulka cayaaraha 23
Dhismaha, dhismaha 76
Qalabka dhismaha 11
Noocyada dhulka 17
Xulashada calaamadaha 22
Qalabka taraafikada 45
32 kala duwan
Qaybaha korontada 5
Mishiinada iyo qalabka 55
Qaybaha guuritaanka 30
Waxay muujisaa 5
9 kala duwan
Dhuumashada, P & ID 184
1 kala duwan
Biyaha, wasakhda 5
Gaadiidka-calaamad u taagan. 15
Calaamadaha taraafikada. 31
Qaybaha korontada 31
Ku rakibida 199
Xawaaraha wareegga 41
Qaybaha korontada 8
6 kala duwan
Sidaas darteed haddii aad raadinayso blocks, waxaan ku talinaynaa Forum-ka, inkastoo ay sidoo kale ku haboon tahay in lagu daro liiska goobaha bixiya blocks Qalabka CAD-ka ah Online y Cben.net
Post Previous«Previous Ka soo qaad AutoCAD 2009 bilaash ah
Post Next Si dhaqso ah u keydso Microstation, ka dhigNext »
5 Jawaab in "More blocks for AutoCAD"
Waxay leeyihiin jumlado wanaagsan sida aad u soo dejisan karto
Marcos, AutoCAD looma baran karo kali ahaan, ugu yaraan maahan mid fudud.
Waxaad heleysaa wax soo saar badan:
- u gudub koorsada meesha aad degan tahay
-Ku iibso koorso si aad u bartid AutoCAD fiidiyoow.
Marcos Morales isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa autocad 2009 ku rakibtay kombiyuutarkayga Spanishka mana isticmaali karo, qof ayaa iga caawin kara.
Qaarkood waa la cayimay oo lama soo dejin karo.
JUANJO isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAD HALKAN HALKAN WAX KA QAADANAYAA WAX KA HELI KARTAA WAXAAN U BAAHAN TAHAY WAXAAN U BAAHAN TAHAY WAXAAN KA HELI KARAA